Babhentsisiwe abangcatsha uWinnie Madikizela-Mandela kwi-ANC #Winnie - Vernac News
April 12, 2018 May 1, 2020 Vernac News
Umfanekiso bhanya-bhanya ongobomi begqala lomzabalazo uveze lubala ibholo lokwenyelisa igama lalenkokheli.
Lomboniso oveliswe nguPascale Lamche uveza lubala inyaniso ngobomi buka Madikizela-Mandela owazibandakanya nomzabalazo wenkululeko eselula. Kulomboniso kuvezwe iziganeko ezigqamileyo kubomi balenkokheli ukususela ngeminyaka yo-1960 ukuya kutsho kwiminyaka yenkululeko.
Lo mboniso uveza iinkxwaleko eligqala lathi lazibona liphantsi kwalo ngenxa yamayelenqe angapheliyo worhulumente wengcinezelo.
Eyona nto yothusayo ke ngalomboniso kukubhentsiswa kwebholo lokwenyelisa lenkonkheli, phofu isisicwangciso samaqabane akhe wombutho i-ANC.
Kulomboniso owayesakuba lipolisa uHenk Heslinga udize inyala lokuba wathunywa ngowayesakuba nguMphathiswa kurhulumente ka Nelson Mandela uSydney Mufumadi ukuba baphande kwabungqina okungangqamanisa uMadikizela-Mandela nokugwintwa kwetshantliziyo uStompie Seipei.
Olu phando labuya nelize ke ngoba uMadikizela-Mandela zange afunnyaniswe enetyala ziinkundla zomthetho. Oyena mbulali kwafumaniseka ukuba nguGerry Richardson owayeyinxalenye yeqela iMandela Football Club, kucaca ukuba lo ka Richardson wambulala uStompie emva kokuba ledyongwane yafumanisa ukuba uRichardson usebenzela urhulumente wengcinezelo, ngamanye amazwi wayeyimpimpi.
Kukwacaca futhi okokuba elibholo laliphekwe ukuze kwenyeliswe igama lika Madikizela-Mandela phambi kwenkomfa yonyulo yango-1997 eMafikeng, nalapho uJacob Zuma wonyulwa njengosekela-mongameli engachaswanga emva kokuba eligorhakazi lazibeka phantsi intambo kunyulo lwalonkomfa.
Akakaphefumli uMufamadi okanye iqela le-ANC malunga nezi zityholo.
Eligqala lizakungcwatywa ngomgqibelo umhla we 14 EkaTshazimpuzi 2018 eRhawutini.
Tagged Winnie Madikizela-Mandela